Drafitra fandraharahana rongony - Ahoana no fanoratanao drafitra fandraharahana ho an'ny Marijuana biz
Ahoana ny fomba hanoratanao drafi-piasana cannabis
Ny drafitra fandraharahana rongony dia zava-dehibe amin'ny orinasa mitady hanombohana amin'ny indostrian'ny rongony. Drafitra fandraharahana iray ny blueprint ho an'ny orinasam-bazahazy ary afaka manala na manapotika ny fangatahanao izy io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manome horonantsary manampy vitsivitsy momba ny drafitry ny orinasa rongony, manangona vola ho an'ny orinasanao rongony ary manome drafitra ilaina ho an'ny singa iraisana amin'ny drafi-pandraharahana rongony maro.
Soso-kevitra Pro: INDRINDRA lisansa cannabis ny fangatahana dia mitaky drafitra fandraharahana ao anatin'ny fizotry ny fangatahana fahazoan-dàlana.
Ny fanoratana drafitra fandraharahana dia mety ho lahasa goavambe, ary ny mpanolo-tsaina rongony, toy ireo ao Mpahay lalàna momba ny angovo, mahay amin'ny fizotran'ny drafitra fandraharahana matanjaka. Amin'ity lahatsoratra ity dia hizaha izay rehetra ilainao mba hamoronana drafitra fandraharahana rongony mafy orina - na ho an'ny Fambolena na dispensary.
FIVAVAHANA MISY: Ohatrinona ny manokatra dispensa-rongony
Maniry ny fanampiantsika hanoratra drafi-pandraharahana rongony?
Hanomboka orinasa rongony ve ianao? Raha eny ny valinteninao, dia holazainay aminao ny fomba hamoronana drafitra fandraharahana rongony tonga lafatra izay hampiseho amin'ny mpampiasa vola anao ny tena mety amin'ny orinasanao.
Mba hanaovana drafitra fandraharahana rongony tsara dia mila fampahalalana mifandraika amin'izany ianao. Tokony ho fantatrao ny fomba hampiasanao, ny karazana vokatra kasainao hatolotra amin'ny tsena, ny karazana firafitry ny orinasa tianao hampiharina ary ny fomba kasainao hahitanao ireo mpanjifa mety.
Mazava ho azy fa manaiky ny zavatra iray isika.
Ny famoronana drafitra fandraharahana rongony dia sarotra rehefa manomboka ianao.
Ahoana no ahafahanao milaza hoe ohatrinona ny vola ampiasain'ny dispensary, na ohatrinona ny asa fambolena raha tsy manana fahalalana voalohany ianao? Sarotra be ny mampivelatra a drafitra fandraharahana dispensary na ny drafi-piasan'ny fambolena cannabis raha tsy hoe efa nahita fandidiana teo ianao.
Ny drafi-piasana cannabis tsara dia tsy hoe mampiseho ireo mpampiasa vola mety ny fahaizanao manomana ny asanao. Hanambara ihany koa ireo teboka tokony hodinihina raha te hahazo tombony amin'ny orinasanao ianao amin'ny farany.
Maninona no zava-dehibe ny famoronana drafi-pandraharahana
Fianarana iray avy amin'ny University of Oregon mampiseho fa mitombo haingana kokoa ny fandraharahana miaraka amin'ny drafitra ary mamorona tombony bebe kokoa amin'ny fotoana maharitra. Ny fandinihana hafa dia mampiseho ihany koa fa ny mpandraharaha izay manangana drafi-piasana dia 152 isan-jato no azo inoana kokoa manomboka ny orinasany. Ny drafitry ny fandraharahana dia fitaovana stratejika ho an'ireo mpandraharaha izay manampy azy ireo hahita ny tanjony mandritra ny fotoana fohy sy maharitra.
Folo tena lehibe amin'ny famoronana drafi-piasana cannabis dia:
Mizara tanjona manokana ho anao sy ny mpitantana anao
Mamorona paikady, laharam-pahamehana, ary hetsika mifandraika izay hampiakatra ny orinasanao amin'ny ho avy
Fiatrehana ireo hevitra azo ampiharina amin'ny paikadinao
Manapa-kevitra momba ny maodely raharaham-barotra cannabis sy ny firafitry ny orinasanao
Manangàna olona mahay indrindra izay hanampy anao handresy ny tsena haingana kokoa
Fanombanana ny fizarana ankapobeny amin'ny orinasanao sy ny fitadiavana loharanom-bola mety amin'ny maodelin'ny orinasa
Mamorona ny fampindramam-bola sahaza ho an'ny fampitomboana ireo faritra mifandraika amin'ny orinasanao
Ny kendrena ny tsena tena izy miaraka amin'ireo vokatra izay hampiasa ny tanjona ary mamahana ny fitakian'ny tsena
Mihena ny vidin-javatra tsy ilaina amin'ny fanokafana orinasa iray
Mikaroka ireo vahaolana manova ny orinasanao ho tsara kokoa ary mametraka anao amin'ny tsena izay manome lanja ny vokatrao
Ireo soa rehetra ireo avy amin'ny drafi-piasan'ny cannabis dia hita rehefa mandinika ny lafiny rehetra amin'ny drafitrao.
Tsy mazava loatra ny antony mahatonga ny drafitra hitondra ny ho avy amin'ny orinasanao rongony. Ka mamorona drafitra tonga lafatra izay hiresaka momba ny orinasanao amin'ny fomba tsara indrindra? Ho tsapanao ny tena tanjon'ny orinasanao, ary hiharihary ny tanjonao amin'ny ho avy.
Fantaro izay ilainao mba hamoronana drafitra fandrobiana cannabis mahomby sy mahomby izay hitondra fahombiazana anao.
Manoratra drafi-pandraharahana ara-barotra
Ny fananana drafitra fandraharahana rongony marina dia mampitombo ny fahafahanao manintona mpampiasa vola sy mpandraharaha hafa izay vonona hiara-miasa aminao.
Rehefa te-hamita ny drafitry ny orinasanao ianao dia tsara kokoa ny milaza ny sasany amin'ireo zava-misy tena ilaina momba ny orinasanao. Ireto sokajy manaraka ireto dia miresaka momba ny fikambanan'ny orinasa sy ny faritra mifandraika amin'ny asanao isan'andro:
Ny famintinana mpanatanteraka dia tokony ho famintinana ny drafi-pandraharahanao feno izay mety hijoro irery. Eto ianao dia asehonao amin'ny mpampiasa vola hoe iza ianao, iza no ao amin'ny ekipa mpitantana anao, inona ny tsena kendrenao, iza ireo mpifaninana ary inona ny olana kasainao hamahana eo amin'ny tsena.
Ny famintinana mpanatanteraka dia tokony hamaritra amin'ny antsipiriany ny maodelin'ny orinasanao. Raha mikasa ny hanokatra dispensary ianao dia alao antoka fa ampidirinao amin'ny mpanjifa ireo vokatra tianao hatolotra. Raha mpanamboatra rongony ianao dia mifantoha amin'ny asanao voalohany amin'ny maha-mpanelanelana anao. Raha mpamokatra rongony ianao dia resaho amin'ny famintinana ataon'ny mpanatanteraka anao ny fomba fikasanao hivarotra vokatra amin'ireo orinasa sy mpikirakira.
2. Famaritana orinasa
Ao amin'ny sehatry ny famaritana ny orinasa, zavatra iray no tena zava-dehibe - ny rafitry ny lalànao. Rehefa manokatra orinasa rongony ianao dia tokony hifantoka amin'ny fepetra ara-dalàna ao amin'ny fanjakanao, indrindra momba ny famokarana sy fizarana rongony. Any amin'ny fanjakana sasany dia mila mamerina mijery tsara ny karazana karazana rongony ekena ianao amin'ny famokarana sy ny fizarana tsena.
Amin'ny fotoana hafa dia mety mila mieritreritra ny hanokatra dispensary ianao miaraka amin'ny vokatra voafetra, arakaraka ny fitsipiky ny fanjakanao momba ny karazana sasany. Ny firafitra ara-dalàna dia ampahany lehibe amin'ny drafitry ny orinasa rongony, ary tsara ny mahazo torohevitra momba ny fandrafetana ity ampahany amin'ny drafitra ity. Ny teboka hafa ao amin'ny faritra famaritana ny orinasa dia misy ny tantaran'ny orinasa, ny filazan'ny iraka, ny toerana ary ny ekipa mpitantana.
3. Fandinihana ny tsena
Rehefa tonga amin'ny famakafakana eo amin'ny tsenan'ny orinasa cannabis dia zavatra iray no azo antoka. Izy io dia orinasa misy tombontsoa betsaka mba hahazoana tombony lehibe. Ny tatitra avy amin'ny Grand View Research dia mampiseho ny sanda manerantany ny tsenan'ny cannabis dia $ 73.6 miliara amin'ny 2027. Ny fanaovana ny famakafakana ifanakalozana tsara dia tena zava-dehibe ho anao mba hahazoana ampahany amin'ny tsena. Tokony ho fantatrao ny fironana miditra ny fampiharana ara-pitsaboana sy olon-dehibe. Misy ihany koa ny ampahany saro-pady momba ny mora na sarotra ny fisian'ny vokatra. Azonao atao koa ny mitady ny vanim-potoana mety amin'ny mpanjifanao sy ny antony mahatonga ny fanjifana rongony. Ny fandalinana ny tsena koa dia manarona ny vidiny. Ity ampahany ity dia hampahomby ny drafi-piasan'ny cannabis raha fantatrao ny vidin'ny tsena sy ny fiovan'ny fotoana. Ny orinasanao dia tsy isalasalana fa hanana hoavy raha mahomby amin'ny fanolorana ny vidiny mora ho an'ny vokatra mitaky. Izany no mahatonga ny famakafakana eo amin'ny tsena dia manome mihoatra lavitra ny famintinana tsotra amin'ny tsena. Asehony aminao ihany koa ny fomba fijery midadasika momba ny fomba hanasanao ny tombotsoan'ny orinasanao.
4. Fandinihana tsara
Amin'ny maha-famakafakana mifaninana dia mahita paikady izay aharihanao misimisy kokoa momba ny mpifaninana aminao sy ny varotra sy ny varotra ary ny paikady momba ny varotra. Ny tanjona voalohany amin'ny fandalinana fifaninana dia ny famaritana ireo tanjaka sy ny fahalemen'ny mpifaninana aminao. Amin'izany fomba izany, ianao dia manisy tombony lehibe amin'ny alàlan'ny fanambarana ny fananana sy ny fahaiza-manao ilaina mba hahombiazan'ny indostrian'ny cannabis. Ny paikady mifaninana dia manangona faritra dimy samihafa: vidiny, fampiroboroboana, fampielezana, dokam-barotra ary vokatra.
5. Management & Operations
Ao amin'ny fizarana fitantanana sy asa fitantanana, tokony hiresaka momba ny rafitra fandaminana misy anao ianao. Asongadino ianao sy ny ekipanao ary lazao ireo andraikitra lehibe ao amin'ny orinasa. Lazao hoe inona no asa hiasan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, sy ny fomba fiasan'ny orinasanao. Matetika ny fitantanana ny orinasa rongony dia mamaly ny fahaiza-manaon'ny fikambanana, ka izany no antony tokony hamolavanao paikady hitazomana ny orinasanao ho tonga amin'ny daty vaovao momba ny fanambarana vaovao sy ny fanovana ny tsena. Ny orinasa rongony matetika dia rafitra orinasa miaraka amin'ny fomba fiasan'ny ekipa.
Indraindray, tsara ny mahita mpiara-miasa mitovy traikefa afaka manampy anao hahita fomba fijery lehibe kokoa amin'ny orinasanao. Vokatr'izany dia mety hiafara amin'ny fiaraha-miasa ianao izay hampitombo ny fahafahanao mandresy ny tsena. Ny sehatry ny fitantanana sy ny asa ao amin'ny drafi-pandraharahana rongony dia manarona ny haitao sy ny rafitra fitehirizan-tsainao amin'ny famonosana, fametahana marika ary fizarana vokatra. Ny vahaolana famonoana anao dia misy ifandraisany ihany koa.
6. Ny varotra sy ny varotra
Ity fizarana ity dia zava-dehibe ho an'ny tombotsoanao. Rehefa tonga amin'ny sehatry ny varotra sy ny varotra dia toa ny toerana misy anao eny an-tsena. Eritrereto ny fomba handrosoanao ny vokatrao, iza ireo mpanjifa mety aminao, ny fomba hanoloranao hanova ny tsena sy ny tombotsoan'ny tolotra ataonao. Te hampiasa paikady marketing amin'ny dizitaly ve ianao, sa mila fampiroboroboana amin'ny tranokala? Ao amin'ny varotra dia mila ny fahaiza-manao kaonty ianao, noho izany dia tsara kokoa raha manana kaonty stratejika ao amin'ny ekipanao. Fantatry ny mpifaninana aminao ny zavatra ataonao, ary tokony ho fantatrao koa ny azy. Karohy ny tsena ary jereo ny fomba ahafahanao manendry ny marinao hialana amin'ny valalabemandry. Ny orinasa cannabis dia "orinasa tsara indrindra amin'ny folo taona", araka ny fiantsoan'ny sasany azy, fa raha te haharitra mandritra ny folo taona maharitra ianao, dia mila miana-kendry am-pahazotoana anao. Amin'ity lafiny ity dia miezaha hieritreritra ny antony hitakian'ny orinasan-tsakainao amin'ny ho avy.
7. Famintinana ara-bola
Ho ampahany farany amin'ny drafi-piasan'ny cannabis, manamboara fomba miavaka sy marina famintinana ara-bola. Misy fanambaram-bola telo azo ampidirina ao: ny vola miditra, ny vinavinam-bola ary ny taratasy fifandanjana. Ao anatin'ny fanambarana ny vola miditra dia tokony hodinihinao ny telovolana na ny taona fidiram-bolanao.
Rehefa manomboka orinasa ianao dia tsara kokoa ny mifantoka isam-bolana na farafaharatsiny amin'ny volana voalohany amin'ny drafitra fidiram-bolanao. Indraindray, sarotra ny milaza ireo vinavina. Ny lafiny hafa amin'ny drafitry ny orinasanao, indrindra ny famakafakana ny fifaninanana sy ny famakafakana ny tsena, dia hanampy anao hamorona sary iray amin'ny famintinana ara-bola anao.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa vola dia mijery ity famintinana ity ho toy ny teboka mifandraika rehefa mieritreritra fiaraha-miasa, ka izany no mahatonga ny famoronana topy maso ara-bola amin'ny antsipiriany dia mety hitarika any amin'ny orinasanao tsara kokoa. Pro forma koa dia handray anjara amin'ny famintinana ara-bola anao. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny forma, vakio ny anay Cannabis Pro forma ho an'ny dispensaries sy ny Grow lahatsoratra ary jereo ny video YouTube anay.
Cannabis Pro Forma ho an'ny drafi-pandraharahanao
Ny drafitry ny orinasa rongony dia mila angon-drakitra ara-bola. Ireo rehetra ireo dia miankina amin'ny toerana misy anao eo amin'ny tsena sy ny fikarohana ataonao momba ny tsena. Manana angon-drakitra tsena rongony izahay hanampy anao hahafantatra:
Ohatrinona no ampiasain'ny dispensary?
Ohatrinona ny vokatry ny asa fambolena?
Tsy misy ny fampanantena fa ny zava-drehetra dia ho araka ny nokasanao, fa indraindray, ny fandalinana tsara dia afaka mampiseho anao teboka sasany izay mety hampiala vola aminao amin'ny ho avy.
Mandritra izany fotoana izany dia ho hitanao ny fomba ahazoanao tombony amin'ny vokatra rongony sasany na ny fomba ahafahanao mametraka ny tenanao ho an'ny olona hahatadidy ny marikao sy ny vokatrao.
Zava-dehibe ny drafi-pandraharahana rongony satria tsy misy fomba tsara kokoa hahitana ny fomba fijery tena misy ny rongony.
Drafitra fandraharahana ara-barotra
Misy lafiny hafa koa hodinihina eto. Tokony ho fantatrao izay karazana rongony tianao harahina.
Raha mikasa ny sokafy ny dispensary cannabis, izay ny ankamaroan'ny mpandraharaha cannabis dia mamorona drafitra ho anao, ilainao izao fampahalalana manaraka ireto izay tafiditra ao amin'ny drafi-pandraharahana cannabis:
Antsipirian'ny toerana- Rehefa tonga amin'ny toerana misy azy dia mila manaraka ny lalàna momba ny zon-tany amin'ny fanjakanao, firenena sy tanànanao ianao. Ny ankamaroan'ny faritra amerikana dia misy fameperana momba ny fanokafana dispensary akaikin'ny sekoly, kianja filalaovana, valan-javaboary, fiangonana, ary koa ireo foibem-pitsaboana fiankinan-doha. Mety ho famonoana goavana io satria matetika ny tanàna dia feno an'ireny fotodrafitrasa ireny ary mila refesinao ny halaviran'ny elanelany amin'ireo faritra ireo. Any Illinois, ny halavirana dia tokony ho 1000 metatra, any California, 1,500 metatra izy, raha any Ohio kosa, 600 metatra farafaharatsiny.
Ny lisitry ny vokatra sy serivisy kasainao omena ny mpanjifanao - Raha mbola tsy fantatrao hoe inona ny vokatra tianao hapetraka eny an-tsena, dia tsara kokoa ny manao fikarohana eny an-tsena ary mijery hoe inona ny karazana vokatra mety tsara ho an'ny faritra tianao ho rakofana. Indraindray, ny tsena tototry ny karazana vokatra dia tsy hanome tombony anao. Mila manolotra zavatra izay ho hitan'ny olona ho sarobidy ianao. Ny fikarohana eny an-tsena dia dingana iray tena ilaina amin'ny famoronana drafitra fandraharahana rongony miaraka amin'ireo vokatra izay hanome ny tsena zavatra miavaka sy miavaka. Hitondra tombony bebe kokoa aminao ihany koa izany amin'ny fotoana maharitra.
Antsipirian'ny fitantanana fivarotana dispensary - Ho an'ny fanokafana fivarotana dispensary sy famoronana drafitra fandraharahana rongony mahomby dia mila manapa-kevitra momba ny andraikitra sahaza sy ny asa fitantanana mety ianao. Valio ireto fanontaniana manaraka ireto. Iza avy ireo mpamatsy? Ahoana no hitantanana ny lisitra? Ilaina avokoa ireo teboka rehetra ireo raha tianao ny hiasa isan'andro ny orinasanao, ary mila fantatrao tsirairay ny antsipirian'ny fitantanana fivarotana dispensary anao. Indraindray, mora ny mamorona drafitra fandraharahana, saingy ny zava-misy dia mampiseho fa misy olana tsy ampoizina mety hipoitra tampoka. Noho io antony io dia tsara ny manana drafitra fiarovana ny orinasa eo akaikin'ny drafitry ny orinasanao mahazatra.
Famintinana ny asanao isan'andro - Ity faritra ity dia mety ho sarotra be satria toa mora. Ny asanao isan'andro dia ny hetsika kasainao hotanterahina mandritra ny andro. Raha manomana azy rehetra mialoha ianao dia hanana sary mazava momba ny ora fiasanao, ny fialantsasatra, ny antsipirian'ny fandaharam-potoana, ny andraikitry ny mpiasa ary ny tena zava-dehibe - ny tombony ara-bola azonao amin'ireo hetsika rehetra ireo amin'ny faran'ny volana. Azonao atao ny mampiditra an'io ampahany io amin'ny drafi-pandraharahana rongony mba hampisehoana ny tanjaky ny orinasanao mandritra ny 30 andro misesy ao anatin'ny taona
Antsipiriany momba ny famatsiana rongony - Na inona na inona ny maodelim-barotra nofidinao dia hanome ny antsipirian'ny famatsiam-bola ireo mpampiasa vola fahatakarana mazava ny fomba handehanao vola amin'ny orinasanao. Amin'ity lafiny ity dia mila fantatrao ny antsipiriany rehetra momba ny asa ataonao mandritra ny andro iray sy volana ary herintaona. Raha fantatrao ny fandaniam-bola sy ny fandanianao isan'andro dia ho mora kokoa ho an'ny mpampiasa vola anao ny misafidy ny modely amin'ny orinasan-draharahanao ary mamatsy vola amin'ny hevitra tsy maintsy atolotrao azy ireo. Ny fotoam-pananana iray indraindray dia lafo kokoa noho ny trano fitomboana, ka izany no antony anaovan'ny famakafakana ara-bola hanampy anao hamantatra hoe inona no ampahany amin'ny orinasa ilain'ny vola betsaka.
Raiso ny fanampiana anay amin'ny drafi-pandraharahana rongony
Drafitra fandraharahana mamboly rongony
Ahoana no ahafahanao manamboatra drafi-piasana cannabis tonga lafatra ho an'ny asa fambolena anao? Mila fahalalana sy fahaizana manokana izany, ny tombatombanao momba ny vokatra, ny refin'ny refy, ny fitrandrahana ary ny vidiny hafa dia azo soratana sy tantanana.
Ny drafi-pandraharahana momba ny fambolena dia mila miatrika ny loharano sy ny fampiasana ny renivohitra hananganana na hanavaozana ny toeram-pambolena rongony. Ny toeram-piompiana premium ao an-trano dia mety mihoatra ny $ 150 dolara toradroa ny fananganana, raha toa kosa ny trano fandraisam-bahiny mifandray amin'ny tatatra dia mety mitentina $ 75 dolara isaky ny toradroa. Azonao atao ny mamita ny drafitry ny gorodonao rehefa mahazo ny drafitry ny orinasa rongony ianao mba hahafahanao mampiseho sary ho an'ny mpampiasa vola.
Asehoy azy ireo ny drafi-pandraharahana, ny volavola ary ny tokotaninao mba hahitana izay hovakiany. Torohevitra - mety tsy ho drafitra fandraharahana ara-dalàna henjana izay takian'ny fanjakana sy ny mpampiasa vola izany. Ireo mpamatsy vola eo an-toerana dia mazoto mahita zavatra tsy manam-paharoa sy tsara kokoa raha oharina amin'izay omen'ny ambiny.
Hahazo tombony amin'ny tontolon'ny rongony ianao raha milaza amin'ny olona ny vokaranao ny mpanjifa na ny mahasamihafa azy ireo. Ny karazana Sativa na Indica iray dia afaka manova tanteraka ny tsena - jereo fotsiny ny Cookies. Na ny dispensary anao dia afaka manolotra karazana serivisy izay hahasarika ny besinimaro indrindra. Lazao amin'ireo mpamatsy vola anao hoe maninona no manana ny hoavin'ny drafitry ny orinasanao ary asehoy azy ireo ny hevi-dehibe mifandraika amin'ny programa.
Tsy misy tena mamaky ny drafi-pandraharahanao - takiana amin'ny fisoratana anarana izy ireo ary fanangonana vola ara-bola araka ny tokony ho izy, fa ny mpampiasa vola kosa hijery ny volanao.
FIVAVAHANA MISY: Cannabis Pitch Decks.
Amin'ny ankapobeny, ny drafitra fandraharahana rongony ho an'ny dispensary na ny fambolena anao dia azo noforonina tamin'ny fomba maro, fa ny drafitra iray ihany izay mampiseho ny fijerin'ny orinasa amin'ny antsipiriany no hanome anao tombony tena izy.
Mangataha fanampiana amin'ny drafi-pivarotanao rongony
Thomas Howard dia mpisolovava rongony sy mpanolotsaina momba ny rongony iza no afaka manampy anao hamorona sary tsara kokoa ny amin'ny hoavin'ny orinasanao rongony. Niaro ny indostrian'ny rongony ihany koa izy ary manome torohevitra mety momba ny fanarahana ny lalàna rongony ao amin'ny fanjakanao.